Momba anay - Shandong Hongyi Material Co., Ltd.
Shandong Hongyi New Material Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny Tanànan'ny Liaocheng, faritanin'i Shandong, mifanila amin'ny toby indostrialy vy sy vy ary milina any Shina Avaratra, faritanin'i Henan ary Hebei.
Ny vokatra avy amin'ny orinasa dia: vokatra: fantsom-bozaka vy tsy misy fangarony, fantsom-boaloboka (fantsom-boaloboka), fantsom-pifanarahana, fantsom-pirazaha / mahitsizoro, takelaka vy tsy mahazaka, takelaka vy tsy misy fangarony, takelaka vy vita amin'ny vy, vilany voninkazo sy volo vy korten ...
Nandalo ny fanombanana ny ISO9001: 2000 fanamarinana rafitra kalitao iraisam-pirenena tamin'ny 2006 izahay.
Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia manana maodely miisa 2 40 manodinkodina mafana, 2 modely 50 totohondry mafana, 1 maodely 60 fikomiana mafana, 1 maodely 90 fikosoham-bokotra mafana, 4 maodely famaranana 30, 4 milina famaranana 50 famaranana, 2 modely 60 famaranana fikosoham-bary, maodely 1 famaranana fikosoham-bary ary tsipika famokarana mangatsiaka 3. (manokana amin'ny famokarana fantsom-baravarankely misavasava, fantsom-bozaka tsy misy fangarony mafana, fantsom-by tsy misy fangarony mangatsiaka, fantsom-pitaritana mangatsiaka voafintina, fantsom-pahazavana mamiratra mangatsiaka, famaritana 10-273mm, fahaiza-mamokatra 300 000 taonina isan-taona) ; Andalana famokarana fantsom-bokatra 2 toradroa toradroa (famokarana fantsom-pirenena tsy manara-penitra sy fantsom-pirazoro mahitsizoro boribory 10 * 10-400 * 400 hatevin'ny rindrina 1mm-25mm); Fitaovana fantsom-by roa miendrika vy manokana. Ny trano fanatobiana entana an-trano sy ivelany dia manarona 20 000 metatra toradroa, miaraka amin'ny fanisana isam-bolana 12.000 taonina sy vy isan-taona amin'ny varotra 100.000 taonina. Toeram-pitrandrahana orinasa hanitarana ny orinasa fanodinana lalina ny fantsom-by, afaka manao fifanarahana fanodinana fantsom-by, totohondry, mihena, tariby ary orinasa hafa.
Manan-java-manan-kery amin'ny fanafarana sy fanondranana aho, mety ho ny ankamaroan'ny orinasan-tsoratry ny mpanjifa. Famokarana maharitra maharitra an'ny fenitra nasionaly (GB) an'ny China, ASTN Amerikanina (ASME), ny fenitra DIN Alemanina, ny fenitra JIS Japoney ary ny fenitra British BS toy ny vokatra vita amin'ny fantsom-by vy tsy misy fangarony, fenitra feno, be mpampiasa amin'ny solika, simika, herinaratra, boiler , fanamboaran-tsambo, masinina ary indostria hafa, miaraka amin'ny orinasan-tsoratry ny firafitry ny firafitra vy lehibe eto an-toerana nanangana fifandraisana fiaraha-miasa stratejika maharitra, vokatra maro no aondrana any atsimo atsinanan'i Azia, Afovoany Atsinanana, Afrika, amerikanina ary faritra hafa. Noho ny kalitaony tsara sy ny vidin'ny fifaninanana, dia neken'ny tsena izy io, ary niara-niasa tamin'i Beijing, tianjin, Shanghai ary tetik'asa monisipaly lehibe hafa. Mandritra izany fotoana izany dia nanamafy ny fiaraha-miasa bebe kokoa amin'ireo orinasa vy ao anatiny ny orinasa. Miezaka ny hahazo ny kalitaon'ny fahavelomana, amin'ny fiantohana ny enti-manana, ny fivoaran'ny mpanjifa marin-toerana. Ary manao hetsika ara-barotra manafatra sy manondrana, manokatra karazan'orinasa vaovao, manitatra fantsom-pandraharahana vaovao.
Ho fanampin'izany, afaka mamorona vokatra vaovao mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa isika.